Hurdada yar yar hurdo - qoraalo iyo qoraalo daabacan
Hurdada hurdo yar yar - xusuus qor iyo qoraal
U hurudo qoraalka hurdo yar yar ee caruurta
Qoraallada iyo qoraalka hurdada yar yari hurdo
Hurdo, cunug, hurdo!
Aabbuhu wuxuu ilaaliyaa idaha,
hooyadu waxay ujoogtaa Bäumelein,
waxaa jira hoos u riyood.
Cirka samee idaha ':
Xiddigaha yar yar waa wan yar,
dayaxa, taas oo ah adhijirka.
Sidaa darteed waxaan idin siinayaa ido
ganaax leh qabad dahab ah,
Tani waa inay noqotaa saaxiibkaaga ciyaarta.
oo ha ku degdegin, oo ha noqdeen sida shinni oo kale,
Haddii kale, eyga adeerkiis ayaa iman doona
oo qaniinaa ilmahayga sharka ah.
Noten von Kinderlied Schlaf Hurdada Kindlein Ka fur sida faylka sawirada
Muuji cagahaaga - qoraalada iyo qoraalka
Ma taqaanaa inta xiddigood ee taagan - qoraal iyo qoraal
Hadda keynta oo dhan waa nasasho - qoraalo iyo qoraal
Hareeraha yar - qoraalada iyo qoraalka